Indlwana enokubukwa kwechibi lase-Greece - I-Airbnb
Indlwana enokubukwa kwechibi lase-Greece
Old Lyme, Connecticut, i-United States
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Lee & Tracy
U-Lee & Tracy uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
Siyakwamukela endlwaneni yethu! Yiba yisivakashi sethu kule ndlwana ethule futhi emiswe kahle etholakala ngaphesheya komgwaqo kusuka e-Ragers Lake enhle futhi ujabulele konke okutholakala echibini kanye nedolobha elihle lase-Old Lyme. Kungakhathaliseki ukuthi ufuna nje ukuhlala futhi uphumule phakathi nokuhlala kwakho, noma ukusebenzisa ngokunenzuzo konke okunikezwa yindawo, kukhona okuthile kuwo wonke umuntu.
Indlwana yethu isendaweni eyingxenye yama-acre e-Ragers Lake West Shores Association, umphakathi omncane, othulile ogudla ichibi. Ilungele ukuhamba, ukuhamba ngebhayisikili, noma ukuhamba ngezinyawo emizileni eminingi eseduze.
Idolobha lase-Old Lyme liwumphakathi wasogwini, ocebile emlandweni, nobuciko obuningi. Thatha uhambo lwezinyawo emgwaqeni ongokomlando we-Lyme futhi ubuke ubuciko bezakhiwo – bese ubamba i-ice cream cone kusuka ku-Old Lyme Ice Cream Shoppe. Hlela ukuvakashela i-Florence Griswold Museum, i-Lyme Art Association, noma ingadi evulekile yokuqoshwa komoya – i-Studio 80 - igugu elifihlekile! Vakashela elinye lamabhishi amaningi endawo endaweni. Thatha uhambo olufushane oluya e-Mystic futhi uvakashele i-Mystic Seaport engokomlando, i-Mystic Aquarium, noma izitolo zase-Mystic Village. Bese uphatha i-palette kwenye yezindawo zokudlela eziningi ezinhle edolobheni.
Ibungazwe ngu-Lee & Tracy
Hlola ezinye izinketho ezise- Old Lyme namaphethelo